Xaaskii hore ee John Cena: Waa tuma Elizabeth Huberdeau? - Mid Kale
Xaaskii hore ee John Cena: Waa tuma Elizabeth Huberdeau?
John Cena Waa Lagdinyahan Xirfadle ah.
John Cena ee xaaskiisii ​​hore ee saafiga ah
Xiriirka Elizabeth iyo John
Haddii aadan maqlin Elizabeth Huberdeau ama aadan aqoonsan iyada, ma tihid taageere WWE. Elizabeth Huberdeau waa lamaane hore ee WWE superstar John Cena, iyo sidoo kale horumariye hanti ma guurto ah iyo haweeney ganacsato ah. Magaceedu waa Liz Cena, si fiican looma aqoon ilaa ay guursatay Cena.
Qofna ma fileyn in Cena ay guursato Elizabeth; wuxuu ka sheegay munaasabad suuqgeyn ah oo filimkiisa 12 Rounds in aan la isku dari doono sanadkan.
Arrimuhu waxay bilaabeen inay shaqeeyaan; waxay is guursadeen July 11, 2009, arooskooduna wuxuu ahaa mid aad u qurux badan; waxay wada qaateen wakhti, Elizabeth Huberdeauna waxay si joogta ah u caawin jirtay ninkeeda.
Miiska ayaa la balaariyay si uu u noqdo mid la wada dhan yahay bishii Maajo 2012. Saddex sano oo guur ah ka dib, John Cena wuxuu dalbaday furiin; Sababta ay u kala tageen ayaa ahayd is afgaranwaa ka dhashay dib u habeyn lagu sameeyay gurigooda, kaasoo ugu dambeyntii la soo gabagabeeyay bishii Luulyo.
Elizabeth Huberdeau hadda waxaa loo yaqaanaa xaaskii hore ee John Cena.
John Cena waa halgamaa xirfadle ah, jilaa, heesaa, iyo martigeliyaha telefishan oo ka socda Mareykanka Waxa uu hore u ahaa wejiga WWE, waxaana uu caan ku ahaa aqoonsigiisa tirada badan ee WWE. Waxa uu ku dhashay April 23, 1977.
Waa maxay macnaha Elizabeth Huberdeau macnaheedu Laga bilaabo bilawga sanadka 2018, tixraacyadu waxay ku qiimeeyaan khadka internetka ilaa $3 milyan, taas oo ay ku heshay dadaallo kala duwan.
Hantideeda saafiga ah ayaa si aad ah u korodhay intii lagu jiray arooskeeda taas oo ay ugu wacan tahay $55-kii hore ee ninkeedii hantidii milyanka ahayd. Sidaa darteed, waxay saxiixeen heshiis horudhac ah, kaas oo dhigaya in aysan xaq u yeelan doonin wax ka mid ah hantidiisa furriinka ka dib. Waxa la filayaa in hantideedu kor u kacdo haddii ay dedaalkeeda sii waddo.
Sida laga soo xigtay ilaha qaar, Elizabeth iyo John waxay ahaayeen macalimiin xamaasad leh oo ku kulmay mid ka mid ah machadyada kor ku xusan. Si kastaba ha ahaatee, shaqaaleysiinta mid ka mid ah oo ka mid ah goobaha dadweynaha ma daaha ka qaadin bakhaarka dambe ee bilawga iyo hagaajinta ka-qaybgalkooda.
AKHRI WAX DHEERAAD AH : Shukaansiga Xanta Nolosha & Xiriirkiisa: Ma Richard Madden Gay?
Jaceylka ayaa si wadajir ah u guursaday July 11th, 2009, ka dib jacayl dheer iyo isfahamka midba midka kale. Gobolka ay ka soo jeedaan ee Massachusetts, lamaanahan ayaa nidar isku weydaarsaday xaflad aroos.
Elizabeth waxay magaceeda u beddeshay Liz Cena ka dib markii ay guursatay John Cena. Horey waxay caan ugu ahayd magacan. Labada ciyaaryahan ayaa u muuqday kuwo aan la kala saari karin dhamaadka. Mar kasta oo ay isu yimaadaan, waxay sidaas u sameeyaan koox ahaan. Liz sidoo kale waxay ka tanaasushay shaqadeeda si ay u caawiso ninkeeda oo ay u raacdo wax kasta oo uu u baahan yahay. Liz waxay dalbatay furiin bishii Maajo 2012, ka dib seddex sano oo cajiib ah oo nolol farxad leh oo guur ah. Xataa weli, sababta furitaankan hore looma aqoon.
Si kastaba ha noqotee, inta lagu guda jiro xayeysiinta filimka 12 Round, arrimuhu waxay bilaabeen inay rogaan, oo ay ku jiraan magaca xiriirkooda. Markii John Cena la soo bandhigay, wuxuu soo jeediyay qodob uu ku sheegay inuu guursaday sanadkan.
Sida laga soo xigtay John Cena, sababta furitaankooda ayaa ahayd khilaaf ku saabsan habka dib u habeynta gurigooda. John wuxuu khiyaameeyay Liz dhowr jeer, sida ay sheegeen Liz iyo qareenkeeda, wuxuuna si joogta ah u shukaansadaa dumar badan. Waxa kale oo uu leeyahay guur ka baxsan. Julaay 18, 2012, furiinkoodii ayaa la soo gabagabeeyay.
AKHRI WAX DHEERAAD AH : Tom Hiddleston: Xiddigta Loki ma guursatay? Hubi Taariikhda Shukaansiga
Liz ma aysan helin wax dhalinyaro ah ninkeeda John Cena tan iyo markii uusan rabin ilmo inta lagu guda jiro jacaylkooda fogaanta iyo arooska fogaanta gaaban. Waxa kaliya oo uu rabaa qoys suubban oo laba ka kooban, kaliya isaga iyo lammaanihiisa.
Fadlan la soco wixii macluumaad dheeraad ah!
Venus Williams Net Worth, Mushaharka, iyo Taageerada 2022
lambarka aqoonsiga roblox ee panda
amazon 30 kaarka hadiyadda ah oo lacag la’aan ah
muusig bilaash ah oo laga soo dejisto youtube -ka oo loo beddelo mp3
xbox one games codes bilaash ah
waa overwatch cross-platform